Tantaran'ny teny malagasy: Satan'ny teny malagasy
2016-07-29 @ 21:28 in Kolontsaina
Mbola mitohy ihany ny fitaterana ny fampirantiana ny tantaran'ny teny malagasy notontosaina tao amin'ny Tahala Rarihasina. Teo aloha isika niresaka ny loharano nipoiran'ny teny malagasy. Eto kosa isika miresaka ny satan'ny teny malagasy araka izay voasoratra eo amin'ny lohateny rahateo. Ankafizo indray ary
Tahaka ny ahoana moa ireo sokajin'olona liana tamin'izany fampirantiana izany. Nisy koa ireo mpianatra avy amin'ny Lisea teo akaiky teo, izay azo inoana fa notarihan'ny mpampianatra azy. Izaho moa mba efa mahalala ihany izany tantaran'ny teny malagasy araka ny aseho etoana izany fa ry zareo kosa tsy mahalala mihitsy hoe inona ny anaran'ny gazety voalohany indrindra amin'ny teny malagasy izany. Ianao koa ve mahafantatra?
Ny afisy fahateo aseho anareo. (Ny roa voalohany naseho tao amin'ny lahatsoratra teo aloha).
Voasoratra eto moa hoe faha maro andriana, saingy mba efa nahafehy faritra lehibe ihany anie ny Sakalava, ary nihorohoro hatrany ny teto Imerina rehefa hoe ho tonga izay ny Sakalava haka vary sy omby sy olona izay tratrany eny am-pandalovana eny. Nahasamihafa ny Merina sy ny Sakalava izay. Ny Sakalava nandalo fotsiny fa ny Merina kosa nametraka ny antsoina hoe Voanjo.
Ny Fanjakana teto Imerina no nahazo fankatoavana voalohany avy amin'ny Hery Vahiny voalohany manerantany tamin'izany fotoana izany ka nahatonga ny fametrahana ny Mpanjaka teto ho Mpanjakan'i Madagasikara na dia tsy voafehy manontolo aza i Madagasikara sy ny nosy manodidina azy.
Vanim-potoana namonoana voalohany ny teny malagasy tsy ivelarana. Nitahiry izany tany an-tranony kosa ny isan-tokantrano. Ny Gazety amin'ny teny malagasy tamin'izany fotoana izany koa tsy mahazo miditra politika loatra (ankoatra ny fandokafana ny firenena frantsay!)
Mety ho tsy tsapan'ny ankehitriny loatra fa ny mpitondra tamin'ny Repoblika voalohany anie ka teny frantsay no teny nampitany ny kabariny tamin'ny vahoaka nentiny. Ny fampitam-baovao tokana ihany (RTM na Radio Televiziona Malagasy) no hany mpampita vaovao ho amin'ny teny malagasy sy ho amin'ny teny frantsay ho an'ny vahoaka manontolo. Azo lazaina fa nifanahatahaka tamin'ireo firenena Afrikana mpiteny frantsay hafa i Madagasikara tamin'izany fotoana izany. Izay fahaizana teny frantsay tamin'izany fotoana izany izay no nilazana ny olona ho mahay na manampahaizana... Fanadinana tamin'izany fotoana izany dia tsy maha afa-panadinana ny tsy fahazoana salanisa tamin'ny taranja teny frantsay.
Ny afisy fahaefatra
Mila fanazavana kely angamba eto. Ny fitakiana tamin'ny tolona 1972 dia hoe fampifanarahana ny fampianarana hifanaraka amin'ny zavamisy eto Madagasikara, betsaka ihany ny ray aman-dreny nieritreritra hoe ho amin'ny teny frantsay no hanaovana izany fampianarana izany. Nisy tsy fifankahazoan-kevitra ihany tamin'io lafiny iray io.
Voasoratra any ho any moa hoe "taranaka natao sorona" izahay. Tsy resy lahatra loatra aho ny amin'izany fa ny tsy nanohizana ny fampianarana amin'ny teny malagasy hatrany amin'ny Ambaratonga Ambony no fandrika namelezana ny mpianatra tsy haharaka ny fampianarana tamin'ny teny malagasy teo aloha ho amin'ny teny frantsay tampoka. Nahafantatra mpianatra nahay dia nahay ny matematika sy ny fizika tamin'ny teny malagasy aho fa very tanteraka rehefa tonga teny amin'ny Oniversite satria tsy misy fantany ilay voambolana amin'ny teny frantsay ireo nianarany tany amin'ny SFF, SAFF, SAFM (Lisea). Nifanotofana koa ny fampianarana ankapobeny... nefa inona no tombony ho an'ny firenena tamin'izany? Lasa mpiasan'olona hatrany ny malagasy!
Namolavola fampianarana milaha-droa ihany ny Filoha Ravalomanana hampianarana ny ankizy ho amin'ny teny Malagasy sy ho amin'ny teny Frantsay (Ary ho amin'ny teny anglisy) fa misy ny hery anatiny sy ny hery vahiny tsy nahazaka izany famolavolana izany. Vao voahongana izy dia nangonina sy nodorana avokoa ireo boky efa mba nanaovana fikarohana manokana izay.
Araka ny fantatrareo moa dia fanaon'ny politisiana ny fampanantenana fa dia ho hitantsika ihany ny tohiny.
Ny afisy fahadimy.
Ny fandoroana ny Lapan'ny tanàna ve no tena nisongadina tamin'ny tolona 1972?
Anaram-birao mbola amin'ny teny frantsay ihany!
Hany ka sady tsy mahafehy teny frantsay no hafahafa rehefa mandre teny malagasy madio ny ankamaroan'ny ankizy mpianatra.